bestpramod – स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल
यही हो अबको बिकल्प , स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल । अभियानको एक सदस्य म अनी यो अभियानको लागी मेरो नैतीक , बैचारिक अनी भौतिक समर्थन । ब्यक्ति , बिचार र ब्यबस्था यि तीन वटै परिवर्तनको लागी लढ्ने अठोट बोक्नुहुने सबैमा मेरो नमन । जय नेपाल ।
Pramod K. Poudel
राजनीति एक संस्कार पनि हो । यो संस्कारले देश , जनता र दुबैको भबिस्य निर्धारण गर्दछ र यो सत्य हो। बिगत देखी बर्तमान सम्म भएका ति खराब संस्कार र कु – राजनीतिक संस्कारकै कारण देश बन्धक बन्यो र आज पनि अवस्था उस्तै छ । म यो अभियानमा सामेल भएर नेपालको समग्र राजनीतिलाई अझ नियाल्दै गर्दा…
राजनीतिक चेतना आँफैबाट बिकास गरौ :
Posted on September 24, 2020 May 10, 2021 by bestpramod
भ्रस्ट पार्टी र भ्रस्ट नेताबाट पालिएका कार्यकर्ताहरुको मानसिकता पनि भ्रस्टनै रहन्छ त्यसैले त अन्धो भएर आफ्ना मालिकको काला कर्तुत र कालै राजनीतिलाई पनि ढाकछोप गर्न र पानी माथिको ओभानो बन्न र बनाउन तल्लिन रहन्छ । त्यस्तै कार्यकर्ताकै भर अनी आडमा कथित नेता आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न तल्लिन हुन्छ । नेपाली राजनीतिमा मै हुँ भन्ने अहम…
राजनीति, युवा नेतृत्व र युवा पुस्ता :
Posted on September 19, 2020 May 10, 2021 by bestpramod
भत्केको घरको बिग्रेको चाल यो हाम्रो नेपाली राजनितिमा ठ्याक्क्कै मिल्ने उदाहरण हो । पुराना नेत्रित्वलाई बिस्थापित गर्दै नेतृत्व, विकल्पसहितको नेतृत्व, युवा नेतृत्वजस्ता विभिन्न शब्दावली जताततै सुनिन्छ । एकथरीले युवालाई अराजक र अपरिपक्व जमात भनेर उपहास गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने अर्को पक्ष युवामा भएको ऊर्जा र नयाँपनले देशलाई निकास दिन सक्छ भन्ने आशयका दृष्टान्त…
यात्रा कठिन छ तर असम्भब छैन : अघी बढ्दै जानु छ।
Posted on September 12, 2020 May 10, 2021 by bestpramod
राज्यको नितीले देशको गती निर्धारणा गर्दछ । यदी सो देशको नितीमा गडबड छ भने समग्र देशको बिकासको गतीमै गडबड हुन्छ नै । यो प्रसङ्ग हाम्रो नेपालमा लागु हुन्छ जुन आज म चर्चा गर्दैछु । राजनीति गतिशील प्रक्रिया हो । यो कहिल्यै यथास्थितिमा रहन सक्दैन । यथास्थिति राजनीतिको प्रकृति पनि होइन । राजनीतिको विकल्प हुँदैन, राजनीतिको…
आउछ हुरी नपत्याउदो क्षणभरमै खेदने !!
Posted on September 9, 2020 May 10, 2021 by bestpramod
लुट्नु थियो धेरै लुट्यौ ,अझै कती लुट्छौ भन लाज छैन अलिकती ?लुट्नै भनी कती जुट्छौ भन ! नाम तिम्रा थरी थरी , काम भने एउटै हेर राजनिती पक्कै हैन , लाजनिती नाम फेर ! कसले रोक्ने छेक्ने कस्ले ?डाडुपन्यु तिम्रै हात लुट्नेखाने पालैपालो , खाने सबै तिम्रै साथ! तिम्रा मती बिग्रिएर , डुबिसक्यो देश हेर…
देशको राजनीतिमा युवाको भुमिका र नयाँ सम्भाबना : स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल ।
Posted on September 4, 2020 May 10, 2021 by bestpramod
हरेक ब्यक्ती कुनै न कुनै आदर्श अनी सिद्दान्तबाट प्रेरित र निर्देशित हुन्छ अनी कुनै एक निती अनुसरण गरेको हुन्छ । तिनै नीतिहरु मध्ये एक मुख्य नीति राजनीति हो । राजनीतिलाई नीतिहरुको राजा पनि भनिन्छ । सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने राज्य सञ्चालन गर्ने नीति नै राजनीति हो । तर आज राजनीति शब्द यति बिकृत भएको छ कि…
के हो यो Right to Reject – Right to Recall पढ्नुहोस । हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा ।
Posted on September 2, 2020 May 10, 2021 by bestpramod
हामीले चुनेर पठाएको नेता वा प्रतिनिधिले हामी जनताको मर्म, भावना अनुसार काम गर्न सकेन ? हामीले मत दिएर जिताएको प्रतिनिधिले स्वार्थपरक काम गर्ने ( सत्ता , पद , पैसा लोभ दुरुपयोग आदी ) गर्न थाल्यो । गर्छु भनेको काम र बाचा गरेको प्रतिनिधिले सो काम र बाचा पुरा गरेन वा गर्न सकेन । हो अब…
बिकल्प यहीबाट सुरु हुन्छ : स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल ।
Posted on August 29, 2020 May 10, 2021 by bestpramod
नेताको परिकल्पना गरिरहँदा, वर्तमान राजनीतिमा लागेका अनुहारहरु सलबलाएर आउँछन् । अहिलेका नेताहरुको विगत सबैलाई थाह छ । वर्तमान सबैले देखिरहेकै विषय हो । देखिएको विगत र अहिलेको वर्तमान अवस्थाको तुलना गर्नासाथ नेताहरुप्रति हरेक नागरिकहरुको पहिलो शब्द नै गालीबाट शुरु हुन्छ । यहीनेर चुकेका छन् नेपालका नेताहरु । विगतमा जे बोले, त्यो गरेनन । विगतमा जस्ता…
स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल : अबको बिकल्प
By: Pramod K. Poudel : हरेक ब्यक्तीले कुनै न कुनै सिद्दान्त अनुसरण गरेकै हुन्छ , यहाँ मैले यहाँ कुरा गर्न खोजेको चाँही राजनीतिक सिद्दान्तको हो । म नेपालको नागरिक भएपछी जब मैले भोट हाल्न थाले नेपालको राजनीतिक अवस्था बारे बुझ्न् थालेको हो त्यो अघी वास्ता थिएन । २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्ती पछीको अहिले सम्मको राजनीतिक चर्तिकला…